ब्रेन ट्युमर भएको कसरी थाहा पाउने ? – OM Hospital
ब्रेन ट्युमर भएको कसरी थाहा पाउने ?
सन्दर्भः बिश्व ब्रेन ट्युमर डे २०२०
ब्रेन भनेको मानव मस्तिष्क हो । ट्युमर भनेको मानव शरिरको कुनैपनि अंगमा अनावश्यक मासु पलाउनु हो । सामान्य भाषामा भन्दा मस्तिष्कमा अनावश्यक मासुको डल्लो पलाउनुलाई नै ब्रेन ट्युमर भनिन्छ । ब्रेन ट्युमरलाई हाम्रो समाजमा निकै भयावह रोगमा रुपमा लिइन्छ । यो मस्तिष्कमा लाग्ने रोग भएकाले पनि यसलाई आवश्यक्ता भन्दा भयावह रोगका रुपमा लिइएको हो ।
टाउको दुख्नु ब्रेन ट्युमरको सबैभन्दा पहिला तथा सामान्य लक्षण हो । ब्रेन ट्युमर भएमा सुरु-सुरुमा टाउको दुख्ने समस्या बिहानको समयमा बढी हुने गर्छ र पछि लगातार हुने गर्छ । यस्तो दुखाइ कयौंपटक यति धेरै हुन्छ कि मानिसले आफ्नो मानसिक सन्तुलन नै गुमाउन सक्छ । यदि तपाईलाई पनि लगातार टाउको दुख्छ भने एकपटक अवश्य चिकित्सकलाई जचाउनुस् ।
मस्तिष्कका कुनै कोषको अनियन्त्रित वृद्धि भएर मासुको जस्तो डल्लो बन्दा ट्युमर हुने हुँदा यो यही नै सावधानी अपनाउँदा हुदैन् भन्ने हुदैन् । तर स्वस्थ वातवरणमा बस्ने ,विभिन्न प्रकारका रेडियसन,विकिरणहरुबाट जोगीने, मद्यपान,धुमपान नगरेर केही हदसम्म बच्न सकिन्छ । कुनै पनि लक्षण देखिएमा वा शंका लागेमा तुरन्त न्युरोलोजिष्ट (नशारोग विशेषज्ञ) सँग परामर्श गराउनुपर्छ ।
बच्चामा ब्रेन ट्युमर के हो ? चिकित्सा विज्ञानले अहिलेसम्म यसको ठ्याक्कै उत्तर खोज्न सकेको छैन । हालै भएको एउटा अनुसन्धानले बच्चाको कान नजिकैको मस्तिष्कमा क्यान्सरयुक्त ट्युमरको समस्या बढिरहेको छ । सो अनुसन्धानले अत्यधिक मोबाइल प्रयोगका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताएको छ । भारत चेन्नईस्थित अपोलो प्रोटोन सेन्टरमा हालसालै गरिको एक अनुसन्धानमा यस्तो देखिएको हो । सो अध्ययनले अनुसन्धानले लामो समयसम्म मोबाइल प्रयोग गर्दा मस्तिष्कको क्यान्सर हुने सम्भावनालाई बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ र बच्चालाई लामो समय मोबाइल प्रयोग गर्न नदिनका लागि सुझाब समेत दिएको छ ।। यसरी लामो समय मोबाइलको प्रयोग गर्दा बच्चामा काननजिकै ट्युमरको खतरा बढेर जान्छ ।
कन्सल्ट्यान्ट न्यूरोसर्जन डा. चन्काद्रमान प्रजापतिका अनुसार मस्तिष्कघात हुँदा ५० प्रतिशत मानिसको मृत्यु तुरून्तै हुन्छ भने ५० प्रतिशत अस्पताल आइपुग्छन् । अस्पताल आइपुगेकामध्ये ५० प्रतिशतलाई बचाउन सकिन्छ । ‘यो संख्या कूल ब्रेन एट्याक हुने सख्याको २५ प्रतिशत हो,’ ‘बाँच्न सफल भएकाहरूको पनि ५० प्रतिशत कुनै भाग वा पाटो प्यारालाइसिस (पक्षघात) हुन्छ । ब्रेन एट्याक क्यान्सर र मुटुरोगपछि मृत्युको तेस्रो ठूलो कारण हो ।’ उहाँका अनुसार गरीव देशमा ब्रेन एट्याकको प्रमुख कारण अस्वथकर जीवनशैली नै हो । ब्लडप्रेसर भएका ३० देखि ३५ प्रतिशतलाई ब्रेन एट्याक हुनसक्छ ।
चिकित्सकीय हिसाबमा मस्तिष्कघातलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो रगतका नशा बन्द भएर हुने मस्तिष्कघातलाई इन्फ्राक्सन र दोस्रो रगतका नशा फुटेर हुने ब्रेन हेमोरेज ।
रगतको नशा फुटेर हुने हेमोरेज
नशा फुटेर हुने एट्याकको प्रमुख कारण ब्लडप्रेसरको औषधिमा गरिने लापरबाही नै हो । यस्तो समस्या विशेषगरी युवामा देखिने गरेको पाइन्छ । डा. प्रजापतिका अनुसार हृदयघातभन्दा ब्रेन एट्याक झन् बढी खतरनाक समस्या हो । हृदयघातको समयमै अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्न सकियो भने मानिस पुरानै अवस्थाको जीवन बाँच्न सक्छ तर बे्रन एट्याकमा शल्यक्रियापछि पनि पुरानै अवस्थामा फर्किन सकिन्न र केही न केही खोट भएको जीवन विताउनु पर्छ । ब्रेन एट्याकमा शरीरको निश्चित पाटो कमजोर रहने सम्भावना रहिरहन्छ । ब्रेन एट्याकले प्यारालाइसिसको सम्भावना समेत बढी हुन्छ । ब्रेन एट्याक भएकाहरुमा मुख बांगो हुने, हातगोडा नचल्ने, आँखा देख्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने जस्ता समस्या देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वभर हरेक वर्ष एक करोड ५० लाख भन्दा बढी मानिस मस्तिष्कघातको सिकार हुन्छन् । जसमध्ये ५० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने ५० लाखभन्दा बढी पक्षघातका कारण शरीरको एउटा वा त्योभन्दा बढी भाग चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तथ्यांकअनुसार बाँकी रहेका ५० लाखमध्ये १५ लाखभन्दा बढी उपचारपश्चात सामान्य जीवनमा फर्कन सफल भएका छन् । यस्तै, ३५ लाख हाराहारीका बिरामी भने सामान्य विकलांगताका साथ बाँचिरहेका छन् ।
वर्ल्ड ब्रेन ट्युमर डेको सन्दर्भमा ॐ काठमाडौं चावहिलस्थित ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर तथा किष्ट मेडिकल कलेजका न्यूरोसर्जन डा. चन्द्रमान प्रजापतिसँगको सफल कुराकानीमा आधारित आलेख ।